Smart Mutauri Wake Up: mutauri wealamu ine Alexa | Gadget nhau
Energy Sistema inopa Smart Mutauri Wake Up, mutauri wealarm ine Alexa
Eder Esteban | | Vatauri, Mufananidzo uye kurira
Yekupedzisira yezvigadzirwa izvo Energy Sistem inotisiira ku IFA 2019 ingangove inyowani kana kushamisa kwezvose. Iyo kambani inopa Smart Mutauri Wake Up, inova alarm speaker, iyo inouya ne Alexa yakasanganiswa semubatsiri. Chigadzirwa chinosara mukati mechikamu cheodhiyo, kunyangwe mune ino kesi nekushandisa kwakawanda kwakasiyana.
Iyi modhi inotangwa kupedzisa iri kukura renji revatauri veiyo firm. Uyezve, Smart Mutauri Wake Up ndiye wekutanga smart mutauri ku inotangwa pamusika unoshandisa radio radio alarm uye ine chidzitiro chikuru. Chigadzirwa icho Energy Sistem inotsvaga kushamisika vashandisi.
Smart Mutauri Muka inoziviswa yekupedzisa huwandu hwerudzi. Iyo modhi ine zvese zvaunoda kuti utange zuva munzira inonakidza uye yakasarudzika inogoneka. Ichi chishandiso chine multiroom tekinoroji uye dzakasiyana nzira dzekutamba dzinoenderana neSpotify neAirplay kuperekedza mushandisi nemumhanzi wavanofarira zuva rese.
Pamusoro pekusanganisa iyo chaiyo mubatsiri Alexa, ine masipika ane Bluetooth 5.0 tekinoroji uye yayo yega-yemakamuri system yekuteerera kumimhanzi zvisina waya chero paunoda. Iyo inopa 2.0 stereo kurira uye 10 W yesimba ine bass yekuvandudza system, kuburikidza nekaviri passive membrane iyo inoita kuti mushandisi anakirwe yakajeka uye yepamusoro mhando kurira. Energy Sistem zvakare inounza isina waya charger inoenderana neQi standard.
Smart Mutauri Wake Wake zvakare ane imwe USB yekuchaja chiteshi uye imwe yekubatsira odhiyo odhiyo mu3,5mm minijack, kubatanidza chero imwe kifaa. Idzi sarudzo dzese dzino gadziriswazve mune alarm alarm mode. Iyo zvakare inosanganisa hombe skrini yekuona kwakakwana mumamiriro ese akareruka uye inopa mukana wekugadzirisa kusimba kwayo.
Iyi alarm mutauri inokutendera iwe kuronga kusvika maviri maalamu zvakazvimiririra. Semuenzaniso, inotsigira imwe yezuva revhiki uye imwe yevhiki. Uye zvakare, ine yekunonoka basa uye yekuzeza yega yega maminetsi gumi. Pasina kupokana, chigadzirwa chinoshamisa kubva ku Energy Sistem.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Mufananidzo uye kurira » Energy Sistema inopa Smart Mutauri Wake Up, mutauri wealarm ine Alexa
Fossil inopa smartwatches nyowani neWear OS kuIFA 2019
Energy Sistem inopa yavo nyowani huwandu hwevatauri